Ndeipi tarisiro yeiyo ichangobva kukwira PVC epurasitiki pasi?
PVC yepurasitiki yepasi nekuda kwekushandisa kwayo kwezvinhu zvine hunyanzvi inowedzerwazve PVC, zvinoenderana neanhasi mamiriro ezvakatipoteredza, inogona kunzi indasitiri yekubuda kwezuva. Tichitarisira kumberi, PVC epurasitiki pasi ichave yakafara nzvimbo yekuvandudza. PVC yepurasitiki yepasi zvakare icha ...
Iko kumuka nekukurumidza kwePVC yekushongedza kana kuchachinja maitiro aripo eiyo flooring indasitiri?
PVC inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji ezasi, anomiririrwa nemapombi uye maprofiles. Sekureva kwenhamba yeruzivo rweLongzhong, mune yekudzika kwekushandisa kwePV muna 2018, huwandu hwepombi nemaprofile aive 27% uye 24% zvichiteerana. Mumakore achangopfuura, asi kune indasitiri mu ...
Forecast uye Ongororo pamamiriro azvino nekusimudzira maitiro emusika wePVC weChina muna 2020
PVC ndiyo imwe yemakemikari makemikari makuru muChina, uye klorini yayo yekudyara inosvika 40% yehoriyamu inogadzirwa muChina, uye ndicho chigadzirwa chikuru kugadzirisa alkali chlorine balance. Zvinoenderana nedhata, panopera 2019, huwandu hwenzvimbo yekugadzira yedome ...
Nezve mapepanhau emhiri kwemakungwa nemagazini kushambadzira kusimudzira
ne admin pane 20-08-21
Nekuuya kwegore idzva 2020, zvakare yakasangana neCorvi-19, Fair uye yekuratidzira show kumira uye zvakare yaisakwanisa kukoka vekunze kuti vashanyire fekitori yedu, saka, raive dambudziko hombe ratakasangana naro kunze kwekuburitsa. Nebatsiro nerutsigiro rweHeBei GuoRui Information Technologe Co., ltd, takashambadzira yedu ...
Pet Chipanji Siporiri, Pet Anonzwa Kutsigira Flooring, PVC Sponge Floor, Pasi Carpet Roll, PVC Carpet, Uriri,